यी ३ राशि भएका बुहारी जसले नर्क जस्तो घरलाई बनाइदिन्छन् स्वर्ग सरह, कहिल्यै आउन दिदैनन् दुख ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी ३ राशि भएका बुहारी जसले नर्क जस्तो घरलाई बनाइदिन्छन् स्वर्ग सरह, कहिल्यै आउन दिदैनन् दुख !
काठमाडौँ / विवाह महिला र पुरुषको मात्र मिलन नभई दुई परिवारको मिलन हो। वैवाहरिक सम्बन्ध सुखद भएमा मात्रै जीवन सुखद रुपमा अगाडी बढ्न सक्छ। जीवन साथी उत्कृष्ट परोस भन्ने हरेक पुरुषको चाहना हुनेछ भने परिवारले पनि उत्कृष्ट बुहारीको आशा राख्छ।